ဃိန် ….ဂိန်…..ကိန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဃိန် ….ဂိန်…..ကိန်
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on Aug 3, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary, Think Different | 20 comments
ဇာတ်လမ်း အစက ဒီလိုပါခင်ဗျ
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေက ပန်းဆိုးတန်းတလျှောက် စာအုပ်တန်းတွေ ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ အဖေ့အမွေ ဆက်ခံသူဆိုတော့ စာအုပ်လေးတွေ မွှေနှောက် ရှာဖွေ လှန်လှောဖတ် ကြိုက်ရင်လည်း ၀ယ်သိမ်းတဲ့ အကျင့်လေးကြောင့်ပါ။ နောင်အချိန်ရတော့လဲ ပြန်ဖတ်ဖို့ ကြိုတင်စုဆောင်းတဲ့ သဘောပါ။ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး ရှာမတွေ့တော့ စာအုပ်တိုက်တွေဘက် ခြေဦးလှည့်တာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီကနေ စာပေနယ်ထဲရော အနုပညာနယ်ထဲပါ ညီအစ်ကို တစ်အုပ်ကြီးရှိတဲ့ အသောက်ဆြာ ဘော်ဒါက ဖုန်းဆက်လာတော့ နေမညိုသေးတာက တကြောင်းမို့ တီးဆိုင်လေးမှာ ဆုံကျရင်း ရောက်တတ်ရာရာ ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ ပြောကောင်းနေတုန်း ဟာသဘက်မှာ လူကောင်ကြီးကြီးနဲ့ အောင်မြင်နေသူ အစ်ကိုတယောက်က လှည်းတန်းဘက်လာဖို့ အကြောင်းပြောလာတော့ ကျနော်တို့ ၃ယောက်သား ရွေ့ကျလေသတည်းပေါ့ သူက လူကသာ ဟာသလုပ်နေတာ စာရေးစာဖတ်ပါ ကိုယ်တိုင်ရော မျိုးရိုးပါ ကောင်းကြသူတွေလေ လေးလဲ လေးစားအပ်သူပါ။အရင်က ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ခုလိုလူစုံရင် ကျနော်က အငယ်ဆုံးနဲ့ အကဲဆုံးမို့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြောကျမို့ အမှတ်တရနဲ့ သွားလေသူ ၅၀ကျော်လေးကို သတိရလိုက်ပါသေးတယ်။ အခုခေတ်က ၅၀ကျော်ရင် အဘခေါ်နေရတဲ့ ခေတ်မို့ သူနဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် အာနိုးကြီးဆို အဘကြီးလို့တောင် ခေါ်ရမလို ဖြစ်နေပါပီ။ အင်းလေ ကျနော်တောင် ကိုယ့်ထက် ၈နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ ၃၀ကျော်တွေကို ဦးလေးလို့ လိုက်ခေါ်နေတတ်တာကိုး ဒါနဲ့ လှည်းတန်းရောက်တော့ အနှီပုဂ္ဂိုလ်က ” ညီလေး မင်းရောင်းစားခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွဲလိုမျိုး အကိုဟိုတနေ့က ရေရွှင်လို့ ပြန်ဝယ်ထားတာတဲ့”။ စာအုပ်က မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းပါ အတွဲ၁ကနေ၁၅ထိ အစုံပါ အတော်တန် လတ်ပါသေးတယ် ကြိုက်ရောင်း ကြိုက်ဝယ်မို့ ၆သိန်းခွဲပေးရပါတယ် ကျနော် ၉၅လောက်တုန်းက ရူးမိုက်ပီးတန်ဖိုးဆိုတာ နားမလည် ၄၅၀၀နဲ့ ရောင်းစားပစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါတောင် ၁ကနေ၈အထိဘဲ ရှိပါသေးတယ်။ အဖေ့မှာ စွယ်စုံကျမ်း အပြည့်တစ်စုံနဲ့ တွဲပျက်(ကျနော် ရောင်းစားခဲ့သော)တ၀က်ရှိပါတယ်။ အဲ့တုန်းကရောင်းလို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံကို ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူးထွက် ပါသမျှ အပြောင် ရွှေသင်္ကန်းလှူခဲ့ဖူးလို့ အဖေ့ခမျာ ဆူလို့ရိုက်လို့လဲမရ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် ဟတ်ကော့ကြီး ဖြစ်ခဲ့တာ ယနေ့ပြန်မြင်ယောင်တော့ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။ စွယ်စုံကျမ်းဆိုတာ ဖတ်ဖူးလှန်ဖူးသူတွေ သိပါလိမ့်မယ် က..ကကတစ်ကနေ ကကေးအိုသီး.. ကူကူ(ခ)ဥသြအကြောင်း ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲအပါ သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာ ယနေ့ဆြာ့ ဆြာကြီးတွေ အသုံးတဲ့နေတဲ့ ၀ိခီဒီပီးယားဆိုတာကြီးထက် အကြောင်းအရာပိုင်း ပိုစုံမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲကိုရီးယား မင်းသမီး နာမည်တွေတော့ မပါဘူးပေါ့ဗျာ။ နောက်ထူးခြားတာက မြန်မာပြန် အနေနဲ့မို့ အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ဆိုပါရစေ။ အဲဒီတုန်းကအကြောင်းကို ခုချိန်နဲ့ ပြန်တွေးစစ်ရင် ကျနော်ဟာ ခွေးလောက်နီးနီးကို မိုက်ခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောပါရစေ။ကျနော့်အိမ်မှာ လက်ရှိအထိ၁၅နှစ်ကျော် အသက်ရှိနေတဲ့ ဘေဘီလုံးတောင် ကျနော့်လောက် မမိုက်ဘူးလို့ အမေကပြောပါတယ်… ဃိန် …. ဂိန် …. ကိန် လို့ပဲ အော်လိုက်ပါရစေ…..။
နောက်ပြီး သူတို့နဲ့(ကျနော့် ရောင်းရင်း အစ်ကိုတော်) ဆုံဖြစ်ကျတော့ စာအကြောင်း ပေအကြောင်း စာအုပ်အကြောင်းတွေ ပြောဖြစ်ကြတယ် ခင်ဗျ။ အဲမှာ လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ ဟာသစာရေးဆြာကဘဲ “ဘိုရဲရေ ငါတို့မင်းတို့ ငယ်ငယ်က လက်စမ်းစာမူလေးတွေ တိုက်တွေပို့တော့ အရွေးခံရရင် ပျော်ခဲ့တာတွေ ကိုယ်ရေးတဲ့စာလေး ဝေဖန်မလားရယ်လို့ အထင်တကြီးနဲ့ အရက်တလုံးကနေ ၂လုံးသာကုန်သွားတယ် မူးပီးမှောက်သွားလို့ အိမ်ကိုသာ တွဲပို့ပေးခဲ့တာတွေ ပြန်တွေးရင် ဟာသတွေဘဲနော်တဲ့”။ ကျနော်လဲ လိုက်ရယ်မိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ယနေ့ခေတ်မှ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ မရှိတော့ဘူးဆိုတာ ကျနော့်ကိုယ်တွေ့မို့ သိပ်တော့ ဘာမှဝင်မပြောပါဘူး။ အွန်လိုင်းစာပေက ယနေ့ခေတ်မှာ တော်တော့်ကို ရှေ့ရောက်နေပါပြီ တချို့တွေ အတော်ကို ရေးနိူင်တွေးနိူင်ကျတာ မျက်မြင်တွေ့နေရတော့ တချိန်ကသမိုင်းမှာ ကမ္ဘာသစ်နဲ့ ကမ္ဘာဟောင်း နောက် ခေတ်ဆန်းစာပေ၊ စာပေသစ်ကိစ္စတွေ ပို့စ်မော်ဒန်ကိစ္စတွေကြောင့် လူတွေကြား အကြောင်းအရာတရပ် ဖြစ်လာခဲ့သေးတော့ ခုအွန်လိုင်းစာပေဟာလဲ အပြောင်းအလဲ အသစ်တရပ်မို့ လက်ခံရမဲ့ အနေအထားပေါ့ဗျာလို့ ကွန့်မိပါသေးတယ်။ အဲ့ဆြာက ဆက်ပြောပါသေးတယ် အရင်ကငါ့စာအုပ်ထွက်ရင် အနည်းဆုံး ၄၀၀၀လောက်ကုန်တယ်တဲ့( ပုံနှိပ် ပထမအကြိမ် အုပ်ရေ ၁၀၀၀ ဆိုတာက ချွင်းချက်ပေါ့ဗျာ)။ ခုနောက်ပိုင်း သိပ်မကုန်တော့လို့ တိုက်ကလဲ သိပ်မကြည်တော့ဘူးဟ ငါများအရည်အသွေးကျ သလားလို့ ကြိုးစားပါတယ် ဒုံရင်းကဒုံရင်းဘဲတဲ့ ဒါကသဘာဝတရားကြီးရဲ့ အလိုအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ နယူးဝိခ်ဆိုလား တိုင်းမ်ဆိုလား ကမ္ဘာကျော် မဂ္ဂဇင်းကြီးတောင် www.com ဖြစ်သွားပီဘဲဟာ။ သူကဆက်ပြောသေးတယ် နိူင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကို ချစ်လွန်းလို့ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ စာအုပ်တွေကတော့ ၁၃၇အုပ်ရှိနေပီ ဆိုဘဲ။ အော်…ဟိုဆြာလေး ပြောတဲ့ ဘာတဲ့ မိထူးပေါ့ကွယ် ဃိန် …. ဂိန်….. ကိန် လို့ပဲ အော်လိုက်ပါရစေ ……. ။
ကျနော်ပြောတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ကိုအာနိူးက မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည်တို့ အမျိုးဗျ။ ကျနော်က အခုတလော ဟော့ဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်သစ်ဟင်္သာကိုးသောင်းပုံပြင် ဆိုတဲ့ စာအုပ်အကြောင်း ပြောဖြစ်ရင်း နိူင်ငံရေးအကြောင်း ရောက်သွားတယ်ဗျ။ အဲဒီစာအုပ်က တချိန်က ဒီမိုကရေစီကြိုးပမ်းမှုရဲ့ ပြယုတ် ၈၈ကလူတွေ အကြောင်း ငယ်ကျိုးငယ်နာ ဖော်ထားတဲ့ ခေတ်သစ် ပရိုဂျက်တာကြီးဆိုဘဲ။ တကယ်ဘဲ အဖြစ်မှန်မို့ ၀ယ်ဖတ်ကြတာလား အကုန်ဝယ်ပီး မီးပုံရှို့လိုက်တာလားတော့ မသိရဘူးပေါ့ဗျာ။ အရင်ကလဲ စာအုပ်အချို့ အဲလိုဖြစ်ဘူးတာကိုး။ ဒီတော့ ကိုသီဟသစ်(သွားလေသူ နောက်တယောက်တို့) ပြောဖြစ်ကြတဲ့ နိူင်ငံရေးရေး လောကရဲ့ ၁ဒီဂရီ ဆိုတာလေးကို ပြန်အောက်မေ့မိကြပါတယ်။ ဆီနိတ်တာဆိုတာကြီးက အလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကိုး။ နိူင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းတွေမှာ ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က လူတွေဟာ အလွန်အရေးပါပုံနဲ့ ကျနော်တို့ နောင်လူငယ်တွေ အတွက် အတုယူမှားရင် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ၁ဒီဂရီ ဆိုတာလေးက ရထားသံလမ်းလို မျဉ်းပြိုင် မဟုတ်တော့ကြောင်း သိသာလာစေပါတယ်။ ခုရက်ပိုင်းဘဲ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေထဲမှာတင် ရခိုင်အမတ်နဲ့ ကျနော်တို့ လမ်းတခြမ်း အမတ်ကြီးတို့ရဲ့ လုပ်ပေါက်တွေက မှတ်သားလောက်ဖွယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲတော့ နိူင်ငံရေး အကြောင်းလေးများ ပြောမိ လုပ်မိရင်ဖြင့် ဘာတဲ့ ၁ဒီဂရီဆိုလားဘဲ ဃိန် …. ဂိန် …. ကိန် လို့ပဲ အော်လိုက်ပါရစေ ….. ။
မတည့်သူတွေကို အလတ်ဂျစ်ထစေတဲ့၊ ခွဲထွက်ရေးသူပုန် ဂေဇက်နွေဦးတရားခံ
အများသူငါက ……ပန်းဆိုးတန်းကို နိုင်ငံကျော် စာအုပ်အဟောင်း
တန်းရယ်လို့ ချစ်သူထက် မိန်းမထက်မြတ်နိုးခဲ့ကြပေမဲ့လည်း
ကျုပ်ကတော့ တစ်ဘ၀စာ စုခဲ့သမျှ စာအုပ်တွေကို
အစာအိမ်က အူတွေ လမ်းဆင်းလျှောက်အစာရှာဒဲ့အတိုင်း
ပန်းဆိုးတန်းမှာ တရိရိ တရိရိနဲ့ထုပစ်ခဲ့ရတာ
ကျုပ်လည်း ခွေးထက်မိုက်တဲ့ကောင်ပါ့ ….
ကရဲစည်ကို လူမှတ်လို့ ပေါင်းနေတာ အခုမှ အဲဒီအကောင်မှန်းသိတော့တယ် …. ဒါဆိုတို့ကပိုင်ရှင်မဟုတ်ရင် အမျိုးတူတွေတောင်ဖြစ်နိုင်တယ် …….. ဒါကြောင့် သူကသများရဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့လက်ဆေးပါ ပို့စ်မှာ လာဟောင် အဲလေ လာရေးသွားတာ သူ့ဇာတိအမှန်ကို ……….
အဘတို့ငယ်ငယ်တုန်းက စွယ်စုံကျမ်းကြီးကို ၄၅၀၀ နဲ့ရောင်းစားမိလို့ အဘဃိန်နေတာကိုဖြင့်သနားမိပါတယ်…
အခုတစ်စုံကို ခြောက်သိန်းဆိုတော့လဲ စိတ်ဝင်စားမိသကိုးဗျ…
တူလေးဆီမှာ စွယ်စုံကျမ်းကိုအစအဆုံး (၁၅)အုပ်လုံးလုံးအပြင်
အဘရေ… ၀ယ်လက်သာရှာလာခဲ့… ကျွန်တော်တော့ အဖေအိပ်တဲ့အချိန်စောင့်ခိုးပေးပါ့မယ်…
အိမ်အောက်ထပ်ကနေပြီးတော့ ကိုအမတ်မင်းရေ ကားတစ်စီးငှားပြီးသာလာစောင့်… ဘီဘီဖိုးဗျို့… ဘီဘီဖိုး….
ဟယ် …ဂယ် ဂျီးလား
နောက်ရဘူးနော် အတွဲ(၁) ကနေ (၁၅) အပြင်
၂နှစ်တစ်ခါ ထုတ်တဲ့ စွယ်စုံကျမ်းနှစ်ချုပ်လည်း ရှိရင်တော့
လတ်သေးလား ချိတ်ပေးမယ် အဟိ
ဃိန်… ဂိန်…. ကိန်
အိမ်ကအဖေမအိပ်သေးတာခက်တယ်… အင်းပေါ့… မနက်(၁၀)နာရီဆိုတော့ ဘယ်သူအိပ်မှာတုန်း…
ဟုတ် … သများလည်း …ဖတ်ချင်သားဗျ…
၀ီကီပိဒိယ ပေါ်တော့ နှစ်တိုင်း ၀ယ်ပီး အပ္ပဒိတ် လုပ်ရတဲ့
အန်စိုက်ကလိုပိဒိယ ကိုတောင် ဖနှောင့်နဲ့ ပေါက်ခဲ့တဲ့ ငတိ ဆိုတော့ …ဟီး…
ရှက်လည်း ရှက်ပါရဲ့လေ … ရှက်လည်း ရှက်တော့ပါဝူး…
၀ီကီ ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါက သိပ်တော့ ယုံရတာမဟုတ်ဝူးဗျ…
နောက်ဆုံး အက်ဒစ် လုပ်သွားသူက ဆြာ့ ဆြာကြီးလား သွပ်ချာချာလား
အပေါ်မူတည်ပီး ရီလစ်ဗန့် က ကျတယ်ဗျို့ ….
ခုတလော ကျုပ် ကိုးကားတဲ့ စာမူ တခု ဆို … ဂလမ်မာတောင် သွက်ချာပါဒ လိုက်နေသေး…
လင့်လား …ဟင့်အင်း ရှဲဘူး … ဘာလို့လဲရှို….
ကိုယ့်ဆြာ တက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ..အဲ့ စာမူကို ဆြာသမားတယောက်ယောက် က
ကောက်ကက် ပြင်ပြီးသား ဖြစ် သွား မယ်ရှို … ကျုပ်ကပဲ အပုပ်ချသလို
ပေါက်ပန်း၄၀ ပြောသလိုလို ဖြစ်တော့မကိုးဗျာ …
ကိုသစ်ရေးတဲ့ ဒို့တတွေရယ် ၀ီကီရယ် …ဒန်တန့်တန်
ကိုတောင် သတိရမိသေးတော့ …..
အူးလေးရဲ ရေ … မိထူး က အလုပ်လွန်တော့..
ငါးပွက်ရာ ငါးစာချတဲ့အဆင့် မကဘဲ …ဘယ်နား ငါးထပွက်မလဲ
ပိုက်ကွန်ကိုင်စောင့်နေကြတဲ့ အဆင့် ဖြစ်ကုန်တော့…
ဈေးကွက်တွေ ပျက်ပျက်ကုန်တာ မဆန်း…
ကျုပ်လည်း ငယ်ငယ်ဒုန်းဂ အုတုဘောဇနသင်္ခါရကျမ်းဆိုလား
အေးဗျာ ကျုပ်လည်း အဲဒီစွယ်စုံကျမ်း (အစိမ်းရောင်ဇင်စအကြမ်းလို ကတ်ထူဖုံးကြီးနဲ့ စွယ်စုံကျမ်းတွေ၊ ရှေးဟောင်းရေဒီယိုလေးရယ်ကို အိမ်မှာရှုပ်တယ်ဆိုပြီး ရောင်းစားပစ်ခဲ့တာ အခုမှ နောင်တရတယ်။ ပိုက်ဆံလိုတာလည်းမဟုတ်….
အိမ်မီးလောင်တော့ မရောင်းရသေးဘဲကျန်နေတဲ့စာအုပ် အကုန်ပါသွားေ၇ာ
အခုဘို၇ဲပြောမှပြန်စဉ်းစားမှ အဲဒါကြီးက စွယ်စုံကျမ်းမှန်းသိတော့တယ်နော်
သများတို့တော့ စွယ်စုံကျမ်းမမြင်ဘူးတဲ့ ဘ၀မို့ အိမ်ကအဖွားဖတ်နေကျ ” လောကဟိတရာသီကျမ်း” ဘယ်ဈေးပေါက်လဲ သိချင်သား
ဒါနဲ့ အွန်လိုင်းစာပေကိတ်စအကြောင်းလေးမေးပါရစေ။ အခုနောက်ပိုင်း စာအုပ်တွေ ၀ယ်မဖတ်ကျတော့ဘဲ အင်တာနက်က ဒေါင်းရင် အလကားရကြတာလား။ ဒါဆို စာရေးဆရာနစ်နာတာပေါ့။
မထူးပါဘူး စီးပွားမကောင်းတော့ တန်ဖိုးကြီး ရှားပါးစာအုပ်တွေ ပွဲစားလုပ်တာဘဲ ကောင်းပါတယ်
ကော်မရှင်ရရင် ဂျေဒီလေး ပြေးဝယ်ပီး သောက်ချင်စမ်းပါဘိ
စာအုပ်မုဆိုး ဒိန်င်း ကော်ဆို လက်သစ်နဲ့ တွေ့နေပါပေါ့လား..
သားအရွယ်နဲ့က စာအုပ်ထူထူဆိုလို့ စွယ်စုံကျမ်းရယ်၊ အောက်စဖွတ် ဒေရှင်နရီရယ်လောက် မြင်ဖူးတာပါ
ဒါကြောင့်မို့ အဲလောက်ဘဲ ပြောနိူင်တာမို့ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
ခုချိန်မှာ ပိဋိကတ် ၃ပုံကို အခွေတွေ ဘာတွေနဲ့တောင် လွယ်လွယ် ၀ယ်နိူင်ပေမဲ့ စွယ်စုံကျမ်းဆိုတာကျ ထပ်လည်းမထုတ် မူရင်းလဲရှား
နောက်ပီး အခွေထုတ်ထားတာကလည်း မူရင်လောက်မစုံမို့ စာအုပ်ခရေဇီများကြား အလွန်ရေပန်းစားနေလို့ ပြောပြမိတာပါ………..။
ဂိန်ဂိန် ဆိုတော့ ကိုယ့်သယ်ရင်း အရိုက်ခံရပြီ အထင် နဲ့ ပြေးအလားသူက။ တကယ် အော်ပြေးတာကိုး။ အစုတ်ပလုတ်တောင် နောင်တချိန် အသုံးဝင်သေးသဗျ။ သိမ်းထား နော်။ လတ်စသတ်တော့ ၀ီကီ နှမြောတော်ပုံ ကြီးကို။
“မိုက် ချက်ကတော့ ကမ်းကုန် မိုက်ချက်ကတော့ ကမ်းကုန်လို့သာ ” ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ် ကိုစည်ရယ်။ အမှားသိ အမှန်ပြင် လိုက် နောက်မဆိုး နဲ့။ နောက်တခါ ထပ်ဆိုး ရင် ဂိန် ကနေ အိန်အိန် အိန် နဲ့ ငယ်သံပိုပါသွားမယ် မှတ်ပါ………….
ကျုပ် ဒက်ဖားဖေ လူပျိုဘဝတုန်းက ဖတ်ခဲ့တဲ့ ဘိုလိုရေးထားတဲ့ ဝတ္ထုတွေ ရှေးသဒ္ဒါစာအုပ်တွေ ဖုန်တက်နေတာတွေ အများကြီးဘဲ
နောက်တစ်ခါ ကရဲစည်လာလို့ ရှိသေးရင် ကရဲစည် ကို ပြမယ်
ခုဒေါ့ ဆီးရီးယား ရောက်သွားပီပေါ့ …
ဘဝ ကို ဆီးရီးယားနဲ့ တင်စားလိုက်တာလား ..
ခင်ဗျားပြောတဲ့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းကိုတော့ ဖတ်ဖူးသေးဘူး ..
ကျုပ်အတွက်ဒေါ့ အပြင်က ဝယ်မဖတ်နိုင်တော့
အွန်လိုင်းက ရှာပြီး ဖတ်ရမယ်ဗျို့ ..
ဃိန် .. ဂိန် .. ကိန် …….
ပြောသာ ပြောရတာပါ ခင်ညားကြီးတို့က ကျုပ်ထက် သဘာရင့်တွေပါ
ခုတလော ရသမြောက် အရွဲ့အစောင်းတွေ
ရသမြောက် အထေ့အငေါ့တွေ ပိုပီပြင်လာသလိုဘဲ
ဒါမှလဲ သမိုင်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲမဲ့ ဂေဇက်နွေဦး မည်ပေမပေါ့
ဃိန် … ဂိန် … ကိန်
ခေတ်သစ် ဟင်္သာတွေစည်းဖောက်လို့ ပင့်ကူစားခံရပြန်ပီပေါ့နော့်
ကျုပ်ဆီမှာတော့ စွယ်စုံကျမ်းနှစ်ချုပ် ၁၉၈၂ နဲ့ ၁၉၈၄ , မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ ၁ ရှိတယ်ဗျ သိမ်းထားတာ ကြာလှပေါ့ ဟိုးးးးစ၀ယ်ကတဲကဘဲ ….:D
ဒီပိုစ့် ဖတ်ပြီးမှဘဲ ပြန်ရှင်းရင်း ကြည့်မိတော့တယ်….
(တားတားလည်း..ပန်းဆိုးတန်းမှာ..စာအုပ်အဟောင်းလေးတွေ.မွှေနှောက်..ရှာပြိး.သိမ်းဖို့ဝယ်တဲ့ အလေ့ရှိပါတယ် ။ )
ဦးရဲ…နဲ့ တားတားနဲ့ …တူတယ်…